Dowlada Kenya oo mar kale codsatay in Dib loo dhigo Dacwada Badda kala dhaxeysa Soomaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowlada Kenya oo mar kale codsatay in Dib loo dhigo Dacwada Badda...
Dowlada Kenya oo mar kale codsatay in Dib loo dhigo Dacwada Badda kala dhaxeysa Soomaliya
Warbaahinta dalka Kenya kuwooda ugu afka dheer ayaa baahiyay in dowlada Kenya mar kale ka codsatay Maxkamada caalamiga ee ICJ in dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Dhageysiga dacwada badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa sadex mar oo hore dib loo dhigay kadib markii dowlada Kenya sidaasi codsatay, lamana oga in Maxkamada caalamiga mar kale aqbali doonto codsigan cusub ee Kenya u gudbisay.
Maxkamada caalamiga ee ICJ ayaa horey u go’aamisay in 15-ka bisha soo socota ee Maarso la dhageesto kiiska dacwada badda u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo mudo sanado ah soo jiitamayay.
Dowlada Kenya ayaana wali ka quusan in muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya laga soo celiyo maxkamada caalamiga laguna xaliyo wadahadal, waxaana taas marar badan ka biyo diiday dowlada Soomaaliya.
Codsigan cusub ee Kenya ku dooneyso in dib loo dhigo dhageysioga dacwada badda ee kala dhaxeeya Somaaliya ayaa kusoo aadaya xili Cabdiqawi Axmed laga bedelay Madaxweynaha ICJ , waxa uuna wali kamid yahay Cabdiqawi 9-ka garsoore ee maxkamada ICJ.
Previous articleMalabsade iyo ‘xaasaskiisii’ beenta ahaa oo xabsiga liinta ku cabaya..
Next articleWasiirka Warfaafinta oo ka hor yimid Damaca Dalka Kenya